2 VaKorinde 8 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Tsamba Yechipiri kuvaKorinde 8:1-24
Kuunganidza zvipo zvekubatsira vaKristu vekuJudhiya (1-15)
Tito achatumwa kuKorinde (16-24)
8 Hama, iye zvino regai tikuzivisei nezvenyasha dzaMwari dzakaitirwa ungano dzekuMakedhoniya.+ 2 Pavaiva mumuedzo mukuru unotambudza, kuwanda kwemufaro wavo neurombo hwavo zvakaita kuti pfuma yavo yekupa zvavainazvo iwande.* 3 Nekuti vakapa zvaienderana nekuwana kwavo;+ ini ndingatovapupurira kuti vakaita zvinotopfuura zvavaiwana,+ 4 uku vari ivo vakazvifungira vega, vakaramba vachikumbira nemwoyo wese kuti vaidawo kupa, kuti vabatsire mubasa rekuyamura vatsvene.+ 5 Uye vakaita zvinopfuura zvataitarisira, vakatanga nekuzvipa ivo pachavo kunaShe nekwatiri maererano nekuda kwaMwari. 6 Saka takakurudzira Tito+ kuti sezvo akanga atanga basa iri pakati penyu, aifanira kupedzisa kuunganidza zvipo izvi zvamakanga mapa nemutsa wenyu. 7 Kunyange zvakadaro, sezvo muri kuwedzera pazvinhu zvese, pakutenda nepashoko neparuzivo nepakuita zvinhu nemwoyo wese nepakukudai kwatinoita, wedzeraiwo pakupa uku kwamuri kuita nemutsa wenyu.+ 8 Handisi kutaura izvi ndichiita zvekukuudzai zvekuita, asi ndiri kungoda kuti muzive kuti vamwe vari kuita zvinhu nemwoyo wese uye ndiri kuda kuona kana rudo rwenyu ruri rwechokwadi. 9 Nekuti munoziva nyasha dzaShe wedu Jesu Kristu, kuti kunyange zvazvo akanga akapfuma, akava murombo achiitira imi,+ kuti muve vapfumi neurombo hwake. 10 Uye panyaya iyi ndiri kutaura maonero anguwo:+ Izvi zvinotobatsira imi, sezvo patova negore kubva pamakazvitanga uye makaratidza kuti mune chido chekuzviita. 11 Saka iye zvino chipedzisai zvamakatanga, kuti muzadzise chido chenyu chekupa maererano nezvamuinazvo. 12 Nekuti kutanga, kana munhu aine chido, zvinonyanya kudiwa ndezvekuti ape maererano nezvaainazvo,+ kwete maererano nezvaasina. 13 Nekuti handidi kuita kuti zvirerukire vamwe zvichiomera imi; 14 asi kuti zvinhu zvienzane, zvenyu zvakawandisa iye zvino zvizadzise kushayiwa kwavo uye zvavo zvakawandisa zvizadzisewo kushayiwa kwenyu, kuti pave nekuenzana. 15 Sekunyorwa kwazvakaitwa kuti: “Munhu aiva nezvakawanda aisava nezvakawandisa, uye munhu aiva nezvishoma aisava nezvakanyanya kushomeka.”+ 16 Saka tinotenda Mwari kuti akaisa mumwoyo maTito chido chekukubatsirai sechatiinacho,+ 17 nekuti akabvuma zvatakamukurudzira kuti aite, asi nechido chaainacho, ari kuuya kwamuri, uye akazvifungira ega kudaro. 18 Asi pane hama yatiri kutuma kuti iuye pamwe chete naye, ine mukurumbira pamusoro pemashoko akanaka wapararira muungano dzese. 19 Kwete izvozvo chete, asi yakagadzwawo neungano dzese kuti tifambe nayo patiri kupa chipo ichi chemutsa kuti Ishe akudzwe uye zvichiratidza kuti takagadzirira kubatsira. 20 Saka hatisi kuda kuti pave nemunhu anotiwanira mhosva pabasa iri rekuona nezvemupiro uyu uri kupiwa nemwoyo wese.+ 21 Nekuti ‘tiri kuita zvinhu zvese nekutendeseka, kwete pamberi paJehovha* chete, asiwo pamberi pevanhu.’+ 22 Tiri kutumazve imwe hama yedu kuti iuye pamwe chete navo, yatakaedza tikaona kuti inoshingaira pazvinhu zvakawanda, asi iye zvino iri kutonyanya kushingaira nekuti ine chivimbo nemi. 23 Asi kana paine mubvunzo nezvaTito, ndinoti iye mumwe wangu uye anoshanda neni kuti zvikunakirei; kana kuti kana paine mubvunzo nezvehama dzedu, ivo vaapostora veungano uye kukudzwa kwaKristu. 24 Saka varatidzei kuti munovada,+ uye ratidzai ungano dzese kuti taitaura chokwadi pataizvirumbidza pamusoro penyu.
^ Kana kuti “ifashukire.”